युगसम्बाद साप्ताहिक - राजनीति अब कमाउने धन्दामा परिणत ! - महेश्वर शर्मा
Wednesday, 04.08.2020, 04:12am (GMT+5.5) Home Contact
Tuesday, 12.17.2019, 01:03pm (GMT+5.5)
हिजोआज नीतिगत निर्णयबाट धमाधम जगा बाँडिएका प्रसंग सतहमा आउन थालेपछि सर्वसाधारणले पनि नीतिगत निर्णयको अर्थ खोज्न थालेका हुनाले त्यसको अर्थ त ‘गाँठी कुरा’ रहेछ भनेको सुनियो । के हो त्यो ‘गाँठी कुरो’ भनेको ? भन्दा कतै उजूरबाजुर पनि नलाग्ने र कतैको वायु–बतासले पनि नछुने हुनाले त्यो त ‘जंगेले बोल्यो बोल्यो’ भनेजस्तो पो रहेछ । त्यसै भएर होला गिरिजाप्रसाद कोइरालाका पालामा पचास हजारभन्दा बढी भारतीयलाई नीतिगत निर्णयबाट नेपाली नागरिकता दिलाएका थिए रे । त्यस्तै सुषमा कोइराला मेमोरियल ट्रष्टलाई भनेर गोकर्णतिरको कताको सय रोपनी जति जग्गा पनि मन्त्रिपरिषद्बाट नीतिगत निर्णय गरेरै दिएका हुन रे भन्ने पनि सुनियो । त्यसैले त्यो गाँठी कुरो नै रहेछ भन्नुप¥यो ।
खोज्दै जाने हो भने यस्ता भित्री गाँठी कुरा कति होलान् कति ? बालुवाटारकै जग्गा त्यही गाँठी कुरा भित्रै परेछ । सरकारका मन्त्रीहरुलाई अख्तियारले छुन नसक्नु पनि त्यही गाँठी कुरैले त होला ! अब त संघीय सरकारका मन्त्रीलाई मात्रै नभएर प्रदेश सरकारका मन्त्रीलाई पनि अख्तियार नलाग्ने प्रावधान गरिंदैछ भनेको सुनिन्छ । सत्ताको मद त ननिको हुन्छ रे । सबैतिर नियन्त्रण गरेर आफ्नै शक्ति बढाउने र अभेद्य किल्लाभित्र रहने सोचाइले त्यति साथदेला जस्तो त बाहिर बस्नेलाई लाग्दैन । तैपनि सत्ताले आँखा तिर्मिर पार्ने शक्तिको प्रयोग गरेकै हुन्छ । सत्ता भन्ने चिजै त्यस्तै हो कि कुन्नि, आफैंले बाटो बिराएको पनि पत्तै हुँदैन भन्छन् । अहिले सगरमाथा राष्ट्रिय निकुञ्जमा समेत होटेल बनेका कुरा पनि ‘गाँठी कुरा’ भित्रै परेका पो हुन् कि !
आदि इत्यादि कुरा नै कोट्याउन नहुनु हो भने अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको अर्थ के हुन्छ खै ? सत्ताधारीका असन्तुलित क्रियाकलाप बिरुद्ध उठेका आवाजलाई नै खुम्च्याउन खोज्दा हुनसक्ने प्रतिक्रियालाई समेत ध्यानमा राखिने नै होला भन्नुपर्छ । जेहोस्– सत्ताशक्तिका अर्घेल्याईलाई पनि राम्रो भन्ने पनि होलान्, उल्क्याउने पनि होलान् । तर, त्यो किमार्थ राम्रो होइन भन्ने शुभचिन्तकहरु पनि छन् ।
भनिन्छ– आज राजनीतिलाई नाफामुखी व्यवसायको रुपमा कमाउने धन्दा बनाइएको छ । विशेष गरी स्थानीय तहमा यस्तो अनुभव गरिंदैछ । जसले गर्दा जनसेवा या समाजसेवा किनारा लागेको छ । कमाउनु छ भने राजनीतिमा लाग्नुपर्छ भन्ने प्रवृत्ति बढ्दो क्रममा छ । गत अम निर्वाचनमा स्थानीय तहमा पार्टीहरुले चुनाव जित्ने आर्थिक सामथ्र्य भएका उम्मेदवार छानेर उभ्याएका र कल, बल छल चुनाव जितेपछि चोरहरुले पनि सज्जनको आवरणमा लूटको खुला अवसर पाए जस्तो भयो । जे होस् भनेर यो व्यवस्था ल्याइएको थियो, त्यही भएको टुलुटुलु हेर्न र व्यहोर्न जनता विवश हुनुप¥यो ।
परिणाम के देखियो भने विशेष गरेर डोजरवाला ठेकदार, विचौलिया, कालाबजारिया, धाकधम्कीबाट थर्काएर, नेताका नाम बेचेर पनि त्यस्ता तत्वले चुनाव जितेकाले सबैभन्दा सजिलो डोजरले जवर्जस्ती जनताका खेतबारी, पाखा, भित्ता भत्काएर बाटो बनाउन थालेर घरगोठ समेत भत्कने स्थितिमा पु¥याएका छन् । डोजरले बाटो बनाउँदा प्राविधिक हिसाव पनि छैन, वातावरण विनाश पनि हेरिएन । खानेपानीका मुहान, खेतका कुला पुरिएको पनि वास्ता गरेनन् । माटो बगेको छ, खेतबारी, घर गोठ भत्केका छन् । सिंहदरबार गाउँमा पुग्यो भनेको त यस्तो विध्वंश र भ्रष्टाचारको आइलाग्यो भन्दै जनता टाउको छाम्दैछन् ।
तल्लो तहका जनता कर तिर्छन्, तर राजश्व छल्नेहरुले छलिरहेकै छन् । नेताले बेवास्ता गरेको फाइदा दलाल, ठेकेदार र माफियाहरुले उठाइरहेका छन् । योग्यता र क्षमता नहेरी आफ्नैलाई काखी च्याप्नाले देशको प्रशासनयन्त्र निष्प्रभावी देखिएको छ । राजालाई शिरमा र जनतालाई काखमा राखेर कामगर्न कहलाएको प्रशासन आज इतिहास बनेको छ । यो पनि र त्यो पनि गर्छौं, सबै कुरा बदल्छौं भन्नेहरुले आफ्नै खिया परेको मनोवृत्ति र व्यवहार बदल्न सकेनन् । बरु उल्टै आफ्नै स्वार्थसाधन गर्ने दौडमा देखिन्छन् । यो त झन पत्याइनसक्नु भयो ।
कुनै पनि सरकारको क्षमता सधैं देखिंदैन, मौकामा काम गरेर देखाउन सक्नुपर्छ । मौका पनि सधैं आउँदैन, छोप्न सक्नुपर्छ । आज सीमा अतिक्रमणको समस्या चर्कोरुपमा देखिएको छ । समाधान गरेर देखाउने मौका हो यो । यसमा चुक्यो भने सरकार पनि कमजार हुन बेर लाग्दैन । जनभावना ननिको पनि हुन्छ भन्ने बुझेर दह्रो किसिमसंग बुद्धि पु¥याए कामगर्ने अवसरका रुपमा सरकारले लिनुपर्दछ ।